Vaovao - Mety ve ny mampiasa ny tendron'ny barb amin'ny hose PTFE randrana vy
Azo atao ve ny mampiasa faran'ny barb amin'ny hose PTFE randrana vy
Mety hanontany ny olona raha azo atao ve ny mamehy ny fantson-tsolika PTFE vita amin'ny vy amin'ny faran'ny barb miaraka amin'ny clamp hose mahazatra amin'ny rafitra solika karbônina ambany.
Ny olona dia mety te-hanova ny vy randrana solika hoses amin'ny PTFE ireo, ary manana barb fitting mifarana amin'ny toerana roa, ary mirenireny raha mety izany?
PTFE dia safidy tsara ho an'ny rafitra solika fa tsy maintsy mampiasa fitaovana AN azo ampiasaina indray ianao na crimped. Azonao atao ny manamarina ny fanehoan-kevitra etsy ambany momba ireo karazana fittings roa ireo:
1, Ny faran'ny hose mihodinkodina PTFE dia mora apetraka ary mora ampiasaina, izay mampiasa rafitra misy ampahany roa mba hitazonana ny hose amin'ny toerany. Miaraka amin'ny famolavolana famoretana manokana, dia azo ampiasaina indray izy io nefa tsy manimba ny fiaraha-miasa, ary ny mpitari-dalana miaraka amin'ny kofehy dia afaka misoroka ny fahasimbana amin'ny fantsona anatiny. ny PTFE hose connectordia clamped mekanika amin'ny PTFE hose fototra mba hanome ny lehibe indrindra azo atao tombo-kase, ary ny Stainless vy takelaka ivelany clamped misaraka mba hahazoana ny lehibe indrindra azo atao hose mihazona hery. Somary mavesatra kokoa izy ireo, saingy milaza fa manana fomba fametahana hose azo antoka kokoa noho ny hidin-trano.
2, Crimped sodina Fittings matetika ampiasaina amin'ny trano. Manangana fantson-drano maro izy ireo satria mila milina hydraulika sy lasitra manokana mba hamehezana tsara ny vozon-tranonjaza mankany amin'ny faran'ny hose. Lafo matetika ireny milina sy lasitra ireny, ka tsy hahita olona na sambo kely mampiasa azy ireny ianao. Ny hose crimped dia mitaky vozon'ny crimp vaovao ampiasaina indray, saingy heverina ho fitaovana matanjaka sy azo antoka indrindra raha crimped tsara.
Fitaovana BesteflonStainless vy randrana PTFE solika hoses amin'ny reusable AN fittings mifarana, na crimped fittings mifarana amin'ny ankapobeny habe AN6, AN8, AN10. Raha misy fanontaniana na fanontaniana momba izany dia mifandraisa malalaka amin'ny ekipan'ny varotra amin'ny sales02@zx-ptfe.com
hose ptfe mainty ho an'ny indostrian'ny fiara
Brakes: Cunifer fantsona na SS PTFE hoses? |...
AN fittings/lines: Feedback ilaina avy amin'ny y...
ptfe coated hose, ptfe hose, Ptfe Tube Melting Point, Hose Ptfe mikorontana - 939/939b, ptfe randrana hose, 6an Ptfe Hose Assembly,